Dhexdhexaadinta Fog - Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota
Soo Bandhigida Adeegyada Dhexdhexaadinta Fog ee Minnesota
Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota (CMM) waxaa ka go'an in ay ka dhigto adeegyada ay heli karaan dhammaan dadka reer Minnesota - iyadoon loo eegin zip code ama dhaqdhaqaaqa.
Marka la isku daro tignoolajiyada hore (telefoonka) iyo kuwa cusub (fiidiyowga shirarka), shakhsiyaadka waxay ka qaybqaadan karaan dhexdhexaadinta iyagoo ku sugan gurigooda ama xafiiskooda.
Haddii aad go'aansatid inaad horay u sii waddo hawsha, Dhex-dhexaadiyuhu wuxuu ku siin doonaa isku-xidhaha aad ka geli karto teleefan smart/ tablet/computer ah ama nambar telefoon. Sida dhexdhexaadinta fool ka fool ah, waxaad heli doontaa fursad lagu maqlo oo lagu maqlo oo aad wada-samayso xal u shaqeeya dhammaan.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan adeegyada dhexdhexaadinta fog, la xidhiidh mid ka mid ah ururada xubnaha ka ah CMM ama halkan ka codso dhexdhexaadin ama wac 1-833-266-2663.
Dhexdhexaadintu ma kugu habboon tahay?